Jesse Lingard oo Shaaca ka qaaday Qorshihiisa Cusub ee Manchester United | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Jesse Lingard oo Shaaca ka qaaday Qorshihiisa Cusub ee Manchester United
Jesse Lingard ayaa shaaca ka qaaday inay ka go’an tahay inuumar kale noqdo xiddig muhiim u ah Manchester United , iyadoo weeraryahanku uu door yar ka ciyaaray Red Devils illaa iyo haatan xilli ciyaareedkan.
28 jirkaan ayaa kaliya seddex kulan bedel ku soo galay Premier League xilli ciyaareedkan laakiin wuxuu dhaliyay goolal ay kaga badiyeen Newcastle United iyo West Ham United.
Lingard ayaa aad u fiicnaa intii uu amaah ku joogay West Ham xilli ciyaareedkii hore ka hor inta uusan ku laaban Old Trafford, xiddiga reer England ayaa sheegay inuu bartilmaameedsanayo inuu si joogto ah ugu bilowdo kooxda Ole Gunnar Solskjaer .
“Mar walba waxaad heleysaa sarreynta iyo hoos u dhaca kubadda cagta,” ayuu Lingard u sheegay suxufiyiinta. “Hoos -u -dhaca oo dhan, waa inaad kalsooni ku qabtaa oo aad sii wadataa rumaynta naftaada.
“Waxay ahayd amaah aad u wanaagsan oo aad loogu baahnaa. Waxaan ku soo laabtay United anigoo kalsooni buuxda qaba waxaanan doonayaa inaan ciyaaro usbuucba isbuuc ka danbeeya, waxay ahayd wax cajiib ah inaan ku laabto London Stadium. markii aan garoonka soo galay.Waxaa lagu qoray xiddigaha si aan u dhaliyo.
“Soo dhaweyntii aan helay, ma dabaaldegi karin. Waxay i muujiyeen jaceyl iyo ixtiraam aad u badan markii aan joogay kooxda. Ma dabbaaldegi karin. ”
Qandaraaska Lingard ee Man United ayaa dhacaya bisha June ee soo socota, laakiin kooxda ayaa wadahadalo kula jirta wakiillada reer England si ay u hesho heshiis kordhin.
Previous articleManchester City oo go’an adag kasoo saartay Mustaqbalka Xidiga Raheem Sterling
Next articleMaxaa ka jiro in ciidamada daraawiishta Galmudug ay u gadoodeen is casilaadda Fiqi?
Jurgen Klopp ayaa xaqiijiyay in Alisson iyo Fabinho ay seegi doonaan kulanka Premier League ee Liverpool ay sabtida la ciyaari doonto Watford. Labada...
Arsenal oo si lama filaan ah ugu dhaqaaqday saxiixa xiddiga Real...
Manchester City 2-0 Burnley, Citizens oo adkeysatay Booskeeda Labaad ee Horyaalka
DEG DEG: Dagaal xooggan oo u dhaxeeya Ahlu-Sunna iyo Galmudug oo...
Luke Shaw oo ka hadlay dhibaatada Jadon Sancho ku heysata Kooxda...